खोइ विपत्तिको पुर्वानुमान ? | चितवन पोष्ट
खोइ विपत्तिको पुर्वानुमान ?
हाम्रो देशमा मौसमको भविष्यवाणी हचुवाकै भरमा हुँदै आएको पाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअघि मौसमको भविष्यवाणी गर्दै देशका केही भागमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरेको थियो । विश्व चमत्कारिक ढंगले अगाडि बढिसक्दा र प्रविधिले युगको फड्को मार्दा पनि हामी पाँचदशक अगाडिकै प्रविधिमा रहेछौँ भन्ने बारा–पर्सामा अत्यासलाग्दो र अकल्पनीय दुःखदायी घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा निम्तिएको विपद् हावाहुरीमात्रै होइन । हावाहुरीमात्रैले घरवास उडाउने, पक्कीघर नै भत्काउने, बिजुलीका पोल, रुख र बस नै पल्टाउने गर्दैन । यस्तो शक्तिशाली हुण्डरीले बारा–पर्साको जनजीवन तहसनहस हुनुका साथै तीसजनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो । सयौँ घाइते भई अस्पतालहरुमा उपचाररत छन् । घरवासविहीन भई हजारौँ बिचल्लीमा परेका छन् । कल्पनै गर्न नसकिने क्षतिका कारण यतिबेला बारा–पर्साका कैयौँ नागरिकहरु पीडित भएका छन् । विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार र राहत सुरू भए पनि पर्याप्त देखिएको छैन । प्रभावितहरुलाई तत्कालका लागि जीवन धान्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ । उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्ने सवालमा पनि तीनैतहको सरकारले समन्वयका साथ काम गर्नुपर्छ । आपत्का बेला राज्यको अनुभूति पीडितहरुले गर्न सक्नुपर्छ । २०७२ सालको महाभूकम्पमा पीडित भएकाहरु अझै पुनस्र्थापित हुन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै आँधीहुरीको वितण्डाबाट पीडित भएकाहरुका लागि उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरी पीडितको उद्धार र आवासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रभावितका लागि बिस्कुट, पाउरोटी र चिउरा दालमोठ नै समाधान होइन । सामूहिकरुपमा उचित बसोवासको प्रबन्ध मिलाएर सफा पिउनेपानी र शौचालयको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा रोग फैलिने र प्रभावितहरु बिरामी पर्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले स्वास्थ्य, खानपिन र अस्थायी बसोवासको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उद्धार र राहतमा सुरक्षाकर्मी, स्वयम्सेवी र स्थानीयले सक्रियता बढाएका छन् । प्रभावित वासिन्दालाई प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, व्यवसायी र मनकारी व्यक्तिहरुले राहत प्रदान गरिरहेका छन् । यस्तो विपत्तिमा पीडितहरुलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । विपद्मा मनदेखि नै सहयोग गर्ने नेपालीको विशेषता रहिआएको छ । तर, सरकारले विपद् व्यवस्थापनबारे उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि खट्किएको छ । किनभने, विपद् निम्तिनुअगावै आफ्ना नागरिकहरुलाई पूर्वसूचना दिन विपत्ति प्रक्षेपण गर्ने विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सकेको भए यति भयंकर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।
सूचना प्रविधिको आधुनिक जमानामा पनि राज्यसँग हावाहुरीको पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि र संयन्त्र नहुनु लाजमर्दो अवस्था हो । छिमेकी भारतले आँधीहुरीले वितण्डा मच्चाउन सक्ने सूचना आफ्ना नागरिकलाई प्रवाह गर्दा हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई सामान्य जानकारीसमेत नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । विपद्ले दुःख र पीडामात्रै ल्याउने गर्छ । तर, विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न सकिएको खण्डमा अकल्पनीय क्षति हुनबाट बच्न सकिन्छ । पूर्वसतर्कता अपनाउन सकिएमात्रै पनि केही हदसम्म क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हामीले बारम्बार भोग्दै आएको प्राकृतिक विपत्तिको नियतिबाट अब भने केही पाठ सिक्नैपर्ने भएको छ । आँधीहुरी र तुफानजस्ता मनसुनी घटनाको पूर्वानुमान गरी धेरै मुलुकहरुले क्षति कम गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मौसममा अनौठो परिवर्तन देखिन थालिसकेको छ । अधिक वर्षा, हुरीबतास, आँधी, हिमपात, शीतलहर, तुवाँलोजस्ता प्राकृतिक घटनामा अनपेक्षित परिवर्तन देखापर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कुनै पनि विपद्का घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।